Mayelana Nathi - ZHEJIANG SANMEN VIAIR INDUSTRY CO., LTD
I-ZHEJIANG SANMEN VIAIR INDUSTRY CO., LTD yasungulwa ngo-August 1988. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni amacansi ezimoto futhi manje sesingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China.Imikhiqizo yethu ithunyelwa emhlabeni wonke, futhi imakethe enkulu ise-USA,Europe. , eCanada. singabahlinzeki bemikhiqizo ethile edumile, izitolo ezinkulu kanye nabathengisi abanjengoWal-mart, COSTCO, HOMEDEPOT, ROSS, TARGET, AUTOZONE, DG, ALDI, LIDL, METRO, TESCO, Carrefour, Auchan, Michelin, Goodyear, Armor All, Dickies njalo njalo. I-Viair iphase isitifiketi sesistimu yekhwalithi yamazwe ngamazwe ye-ISO 9001, Ngokuzikhandla kwabantu bakwa-Viair, inzuzo yethu yokuthengisa ifinyelele ku-32 million US Dollars.
Yonke imikhiqizo yenziwe ngekhwalithi enhle phakathi nomlando weminyaka engama-30 futhi umnyango wethu wokuqapha ikhwalithi uzohlola ikhwalithi njalo. Sizozama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zakho futhi sikusebenzele.
Ithimba labaklami abangochwepheshe, elinolwazi ekwakhiweni kwamata omnyango iminyaka eyi-10. Lihle ngezitayela ezahlukene, ngokusebenzisa idizayini, impahla, idizayini enemisebenzi eminingi neyokudala, izinqubo zokukhiqiza, ikhwalithi ehlanganisiwe nokusebenziseka, ukuze udale izitayela ezihlukahlukene, futhi ezenziwe ngezifiso. imiklamo iyatholakala.
Saqala ibhizinisi ngokukhiqiza umcamelo wobuhlalu
Saqala ukuthuthukisa nokwenza amacansi aphansi ezimoto
I-Viair yaba umphakeli we-Wal-Mart wokhaphethi we-polyester
Sakha ibhrendi yethu i-LAILA, futhi yaba igunya lemikhiqizo edumile emhlabeni wonke iMichelin, Stanley, Disney njll.
Saqala ukuthuthukisa nokukhiqiza i-door mat ngonyaka ka-2000
I-Zhejiang Sanmen Viair Industry Factory